Hello Nepal News » हल्यान्डको चाहना बार्सिलोना कि रियल मड्रिड ? : एजेन्टले मुख खोले
हल्यान्डको चाहना बार्सिलोना कि रियल मड्रिड ? : एजेन्टले मुख खोले
एजेन्सी, चैत ११
जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका युवा स्टार अर्लिङ हल्यान्ड आगामी समर सिजनमा नयाँ क्लबमा जाने चर्चा छ । २० वर्षका गोल मेसिन खेलाडीमाथि स्पेनका दुई कट्टर प्रतिस्पर्धी क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिडले इच्छा देखाएका छन् । त्यसमा पनि बार्सिलोना खुलेर लागेको छ । नयाँ अध्यक्ष जोन लापोर्टाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ऋण काडेर भए पनि हल्यान्ड भित्र्याउने बाचा गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा फसेको बार्सिलोनाका लागि हल्यान्ड अनुबन्धका लागि मोटो बजेट बटुल्न सजिलो छैन । उता, हल्यान्डलाई इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले पनि ताकिरहेको छ ।
आर्थिक हैसियत र अवस्थाअनुसार बार्सिलोनाभन्दा रियल मड्रिडलाई हल्यान्ड भित्र्याउन सजिलो देखिन्छ । किनभने, रियलले पछिल्ला वर्ष खेलाडीका लागि धेरै पैसा खर्चेको छैन । र, ऊसँग लगानीका लागि पैसाको त्यत्ति अभाव पनि छैन । रियल सकेसम्म कम मूल्यमा हल्यान्ड भित्र्याउन सकिने समयको प्रतीक्षामा देखिन्छ । रियलको रणनीति भनेको हल्यान्डलाई सकेसम्म बार्सिलोना जानबाट रोक्नु हो । यदि त्यो स्थिति आए आफैंले भित्र्याउने हो । किनभने, रियल हल्यान्ड बार्सिलोना जाउन् भन्ने चाहँदैन । आगामी समरमा रियलको पहिलो टार्गेट भनेको फ्रेन्च क्लब पिएसजीका केलियन एमबाप्पे नै हुन् । उनी सम्भव नभए मात्रै हल्यान्ड ।
हल्यान्डको आगामी गन्तव्य बार्सिलोना कि रियल भन्ने विभिन्न चर्चा चलिरहँदा उनका एजेन्ट मिनो राइओलाले यसबारे खुलासा गरेका छन् । उनका अनुसार हल्यान्डले डर्टमुन्ड छाड्नेबारे हालसम्म नसोचेको तर त्यो समय उनमा रियल मड्रिडको जर्सीमा खेल्ने चाहना रहेको राइओलाले बताएका छन् । रियलका पूर्वखेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई बिग आइडल मान्ने भएका कारण पनि हल्यान्डमा रियलप्रतिको छाप रहेको राइओलाले बताएका छन् । तर, बार्सिलोना वा अन्य क्लबका लागि खेल्न नसक्ने कुरा नरहेको पनि राइओलाले बताएका छन् ।
‘हल्यान्डका विषयमा थुप्रै चर्चा हामीले सुनिरहेका छौं । उनलाई धेरैले चाहेका छन्, केहीले ज्यादै चाहेका छन् । यसबारे हामी जानकार छौं । तर, डर्टमुन्ड छाड्ने विषयमा हल्यान्डले सोचिसकेका छैनन् । किनभने, त्यहाँ अझै उनको सम्झौता बाँकी छ,’ राइओलाले ‘स्काई स्पोर्ट्स’सँग भनेका छन्, ‘यो साँचो हो, हल्यान्डको चाहना रियल मड्रिडका लागि खेल्नु हो । किनभने, उनमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो र रियलको छाप सानैबाट पर्दै आएको छ । तसर्थ, उनको भित्री चाहना रियल हो । तर, बार्सिलोना वा अन्य ठूला क्लबका लागि खेल्न नसक्ने भन्ने छैन । उचित समयमा उचित निर्णय लिनेछौं । अहिले बोल्ने समय आइसकेको छैन ।’
यता, ३ दिनअघि जर्मन पत्रिका ‘बिल्ड’सँग कुरा गर्दै हल्यान्डले भने अहिले डर्टमुन्डसँग अझै आफ्नो ३ वर्षको सम्झौता रहेकाले केही नसोचेको बताएका थिए । त, उनले सांकेतिक रूपमा यो सिजन कसरी बित्छ, त्यसअनुसार नयाँ कुरा सोच्नुपर्ने भयो पनि त्यो सबैलाई थाहा हुने जवाफ दिएका थिए । यो बताइन्छ कि, जारी सिजन सकिँदा डर्टमुन्ड बुन्डेसलिगामा शीर्ष चारमा रहेर अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिगका लागि छनौट हुन नसके हल्यान्डले आगामी समरमा डर्टमुन्ड करिब पक्काजस्तै छ । डर्टमुन्ड अहिले लिगको पाँचौं स्थानमा मात्रै छ ।
प्रकाशित मिति ११ चैत्र २०७७, बुधबार ०४:४५